Fikradda boodhadhka dhinaceeda BRANDCONCEPT
Rebeit Medical Equipment Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2004
Shirkadda waxaa ka go'an iibinta qalabka laser-ka ee warshadaha quruxda caafimaadka, waxay leedahay iyo isbitaalka guud ee ciidanka, isbitaalka kulliyadda caafimaadka ee Beijing Peking, isbitaalka Beijing, wasaaradda caafimaadka ee isbitaalka saaxiibtinimo ee shiinaha-japan, sida in ka badan 80 hay'ado isbitaal oo ay dowladdu leedahay si loo abuuro xiriir iskaashi, iyo 2013, iyo shirkadda ugu weyn ee laser -ka caafimaadka ee Shiinaha, Wu Hanqi laser oo ah wakiilka guud ee wakiilka guud ee Beijing si ay isaga kaashadaan gacmaha, Adeegyada sida Meilai, Yixing, Liido iyo hay'adaha quruxda caafimaadka ee gaarka loo leeyahay in ka badan 100.
Ka dib 14 sano oo raasamaal ah, sannadka 2018, si wax looga qabto hirarka dhaqaalaha Internetka iyo kor u qaadista fikradda wadaagista si loo dhiso astaanta "Ruibeite" oo si wanaagsan loogu adeego suuqa quruxda caafimaadka, shirkaddu waxay si tartiib tartiib ah u horumarisay heer sare qalabka quruxda caafimaadka madal adeegga xisbiga saddexaad oo leh xirfad iyo xog udub dhexaad ah Shirkadu waxay ku tiirsan tahay tiknoolajiyadda xirfadeed ee saddexda koox ee dhakhaatiirta heerka koowaad ah. Waxaa ka go'an kireynta qalabka iyo iibinta, la -talinta maareynta, shirka xirfadda leh iyo qaybo kale, oo bixinaya goob is -bahaysi deegaan oo xoog leh oo loogu talagalay hay'adaha caafimaadka iyo quruxda, silsiladda noolaha iyo quruxda, iyo aaladaha maalgelinta maaliyadeed
Qalabka Caafimaadka ee Ruibit Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2004
Hay'adaha isbitaal ee dawladdu leedahay ayaa samaysta xiriir iskaashi
U adeegidda in ka badan 100 hay'adood oo caafimaad iyo bilicsanaanta sida Meilai, Yixing, Liido, iwm.
Sannadka 2018, si loo waafajiyo mowjadda dhaqaalaha Internet -ka iyo kororka fikradda wadaagga, astaanta "Ribit" ayaa la aasaasay
Beijing (xi 'an) aasaasihii beerta rui ee la isku qurxiyo 10kii sano ee ku hawlanaa goobta qurxinta, barashada joogtada ah iyo soo bandhigidda tikniyoolajiyadda quruxda caafimaadka ee horumarsan, badeecadaha iyo hababka suuqgeynta, iyo iyada oo loo marayo waayo -aragnimada hawlgalka ee hodanka ah ee hodanka ah iyo madal kheyraadka badeecadda u gaarka ah, ee hay'adaha qurxinta qurxinta badan ee gudaha waxay siiyaan waxbarasho iyo tababbarka shaqaalaha, ku dhawaad ​​kun jeer Waxay ka caawisaa inay si weyn u hagaajiyaan waxqabadkooda iyo qancinta macmiilka, waxaana loo aqoonsaday inuu yahay qofkii ugu horreeyay ee hagaajiya kooxda warshadaha caafimaadka iyo bilicda gudaha.
Beijing (Xi 'an) aasaasaha Rebeit Cosmetology Medical
Waxaan ku hawlanaa warshadaha quruxda muddo 6 sano ah, laga bilaabo quruxda dhaqanka HBS ilaa maareynta maqaarka Kuuriya ilaa quruxda caafimaadka guud ee ka hortagga gabowga bulshada maanta. Waxaan wax ku bartay oo si joogto ah u baaray Hong Kong, Kuuriyada Koofureed iyo Japan si aan ula xiriiro aaladaha iyo alaabada guud ee hadda jirta, si aan u habeeyo barnaamijyada daryeelka maqaarka iyadoo loo eegayo baahiyaha macaamiisha oo aan u xaliyo dhibaatada gabowga haweenka gudaha . Waxaa jira barnaamijyo daaweyn oo u gaar ah maqaarka kala duwan, gaar ahaan maqaarka dhibaatada leh ka-hortagga, daaweynta, dayactirka iyo ilaalinta afar dhinac si loo ilaaliyo maqaarkaaga dhinac walba
Ninka xayaysiinta sare, khabiirka warbaahinta cusub.
Waxaa la aasaasay magacyo ubax oo heer sare ah iyo boorsooyin madaxbannaan, oo ay ka go'an tahay inay haweenka siiyaan alaab tayo leh iyo qaab nololeed qurux badan.
Ku biir warshadaha BEAUTY -ka caafimaadka iyo Quruxda Dhabta ah muddo hal sano ah, ku faafi aqoonta caafimaadka BEAUTY malaayiin isticmaale intarneedka, been abuur wararka xanta BEAUTY caafimaad oo ku bixi macluumaadka khadka tooska ah
Waxa uu ku hawlanaa berrinka cosmetology caafimaad muddo 15 sano ah. Wuxuu mar soo noqday maareeyaha guud ee dibedda ee Huaxi Group, oo ah shirkad qurux badan oo caafimaad u leh Shiinaha. Intii uu xilka hayey, ganacsigii dibedda ee Huaxi Group wuxuu gaadhay koboc sannado ah oo is xigxigay. Beerta quruxda caafimaad ee dhulka hoostiisa sannado badan, wuxuu soo saaray dhadhankiisa gaarka ah iyo waaya -aragnimada hodanka ah ee hawlgalka badeecada, boqolaal ka mid ah shirkadaha quruxda caafimaadka ee waaweyn ee gudaha ayaa bixiya adeegyo istiraatiijiyadeed oo hawlgal ah iyo adeegyo la -talin, laga bilaabo tababarka hore ee alaabta, qorshaynta alaabta iyo meelaynta , adeegsiga goor dambe, daryeelka macaamiisha waa mid aad u wanaagsan khad khibrad dagaal oo dhab ah.
Dhakhtarka Gaarka ah ee Quruxda Dhabta ah
Wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Caafimaadka ee Bethune (oo hadda ah Jaamacadda Jilin), waa mid ka mid ah dufcadii ugu horreysay ee dhakhaatiir qurxiyo ee Shiinaha. Isagoo diiradda saaraya naqshadeynta bilicsanaanta wajiga ee bariga, wuxuu ku hawlanaa qalliin caag ah oo la isku qurxiyo in ka badan toban sano. Qalliinka waxaa lagu yaqaannaa qalliin dabiici ah oo jilicsan. Wuxuu leeyahay guulo u gaar ah qalliinka sifaynta wajiga, quruxda indhaha Kuuriya, xardhinta quruxda indhaha, iyo jacaylka dumarka aka. Qalliinka balaastigga wadnaha.
Waaxda Daawada Daawada, Xarunta Sayniska Caafimaadka ee Jaamacadda Peking
Dhakhtarka Taiwan Nice Clinic, Dean of Beijing Andai Clinic Beauty Clinic
Merz dhakhtar asal ah oo shahaado haysta
Ultherapy (wiishashka sonkorta dabaysha) dhakhtar qalliin oo shahaado haysta
Waji buuxa ayaa la duray cirbad dhammaystiran
Amiirad Princess Hyaluronic Acid waxay ku magacawday dhakhtar cirbad
Hayso hanti badan oo waayo-aragnimo ka-hortag ah
Ku hawlan quruxda caafimaadka muddo lix sano ah, waxay leedahay cilmi-baaris qotodheer iyo waayo-aragnimo caafimaad oo hodan ku ah quruxda leysarka, waxay ku fiican tahay quruxda sawir-qaadista, daaweynta melasma, jajabka, qorraxda, dhibcaha kafeega, finanka iyo hyperpigmentation-finanka dambe, dib-u-soo-noolaynta maqaarka, Maaraynta dhammaystiran ee maqaarka dib -u -nooleyn.
Khabiirka qalliinka ee picoway super picosecond, lataliyaha farsamada gaarka ah ee Sinoron
Macallinka shahaadada kuleelka
Haysato waayo -aragnimo hodan ku ah qorshaynta daaweynta caafimaadka iyo bilicsanaanta
Ultherapy -ga ugu dambeeya ee sonic waverati macallin qalliin oo asal ah
Bare Tababarka Daaweynta Nidaamka Laser Beauty Medical Medical Asia
Sinoron Picoway oo ah khabiir ku takhasusay hawlgalka
Sannado cilmi-baaris qoto-dheer ku saabsan dhibaatooyinka maqaarka ee iman kara iyo hagaajinta meelaha
Sa Iibinta Qalabka
Baaritaanka Maqaarka Ober
Falanqaynta sayniska iyo dareenka ee dhibaatooyinka kala duwan ee lakabyada sare iyo kuwa qoto dheer ee maqaarka. Dareen ahaan oo si cad u muujinaya dhibaatooyinka maqaarka ee iman kara sida midabka oo qoto dheer, dhibco dhiig cas, laalaab iyo sawir qaadid, ogaadaan dhibaatooyinka maqaarka 10 sano ka hor, ka hortag, ogaada oo daawee goor hore.
Jiilka Labaad Super Picosecond Picoway
1064/532/785nm saddex mawjadood oo leh awood kala durugsan oo lagu daweeyo dhammaan xaaladaha maqaarka: 300ps garaaca wadnaha-gaaban wuxuu soo saaraa saamayn naxdin iftiin xoog leh, aad buu u yareynayaa tirada daweynta, raaxo-darro yar, 360-digrii hab faafinta holographic, collagen cusub ayaa dib u helay maqaarka .
Heerkulka Jiilka Afraad
Kor u qaadista, adkeynta, caddeynta, iyo isla mar ahaantaana quruxda caagga Thermage uma baahna qalliin ama irbado, daaweynta tamarta shucaaca aan-duufsanayn, aan duullaan lahayn oo hufan, fidinta, adkeynta, fidinta iyo xarriiqidda khadadka wejiga, saameyntu waxay u dhigantaa qalliinka wiishashka.
Heerkulka Jiilka Shanaad
Baaritaan wax-ku-ool ah oo caqli-gal ah (Wadarta Talo-bixinta 4.0) wuxuu xawaare ku socdaa 25%. Baaritaanka jirku wuxuu ku darayaa hab gariir hagaagsan si kor loogu qaado baaxadda raaxada ee daaweynta. Wajiga iyo jidhkuba waxay ku raaxaysan karaan gariir dhan walba ah. Way ka yar tahay oo ka khafiifsan tahay. Gacanta waxaa ergonomically loogu talagalay si loo hubiyo gariirka siman. Si fiican u hagaaji tamarta soo noqnoqda ee raadiyaha iyadoo loo eegayo booska daaweynta si loo hagaajiyo tamarta ay heshay inch kasta oo maqaarka ah.
Mindida Ultrasonic ee Maraykanka
Dammaanadda heerkulka ugu fiican (Ulthera) heerkulka nidaamka waa qiyaastii 68-72, taas oo ah heerkulka ugu habboon ee wax-ku-oolnimada kolajka wax-ku-oolka ah. Isticmaalka ultrasound -ka diirada la saaray, looma baahna in maqaarka la kululeeyo haba yaraatee, oo waxyeello uma geysan doono maqaarka.
Matrixka Pixel Dot
Tamarta RF ee laba -cirifoodka waxaa maqaarka la siiyaa iyada oo loo marayo kanaal ka kooban isku xigxiga irbado koronto oo yaryar (64 cirbadood ama 44 cirbadood), electrodes firfircoon iyo electrodes soo noqnoqda oo waaweyn. Unugyada aan waxyeellada lahayn ee u dhexeeya irbadaha korontada waxay u dhaqmaan sida “kaydka bogsashada” si ay u kululaan maqaarka maqaarka ee qoto dheer oo ay u keenaan kolajka kolajka iyo xumaanshaha. Waxyaalaha koritaanka la kiciyay waxay kiciyaan isku -darka kolajka cusub. Ku beddel kolajkii hore faybar cusub. Xadhkaha cusubi waxay leeyihiin qaab dhismeed unug oo aad loo adkeeyay oo la hagaajiyay si ay u bixiyaan laalaabkii oo yaraaday iyo muuqaalka maqaarka oo jilicsan.
Qalabka cusub ee Derma Shine 3 ee duritaanka aaladda duritaanka iftiinka biyaha ee Kuuriyada Koonfureed ayaa adeegsada tikniyoolajiyadda cadaadiska taban si ay si sax ah u buuxiso nafaqooyinka maqaarka qoto dheer 1.28 mm ee maqaarka. Kahor intaan microneedles -ku soo gelin maqaarka, isticmaal mitirka cadaadiska taban si aad kor ugu qaaddo maqaarka, ka dibna cirbado badan ayaa markaa si sax ah u galaan lakabka qoto dheer ee maqaarka. Qiyaasta duritaanka iyo inta jeer ee duritaanka ayaa lagu hagaajin karaa shaashadda LED -ka. Waxaa intaa dheer, cadaadiska saliingaha ayaa la sii daayaa ka hor inta aysan irbaddu soo bixin, sidaa darteed ma jirto wax nafaqo ah oo luma.
Midka kaliya ee adduunka - oo uu aqoonsaday DA American. Tiknooloojiyadda soo noqnoqoshada raadiyaha gaarka ah ee asalka ah waxay kicisaa lakabka qoto dheer ee kolajka ee qaybaha gaarka ah si loo dayactiro oo loo koro. Non-invasive, painless, no period recovery, no adkaynta iyo saliidaynta farsamada ugu dambaysa si loo xaliyo nasashada gaarka ah
Vivive waa teknolojiyadda kaliya ee horumarka leh ee ballanqaadaysa inay si weyn u wanaajineyso nasinta qaybaha gaarka ah iyo dareenka G-spot ee daaweynta erayga.
THERMIVA Ilmaha Gaarka ah
THERMIVa waa aalad tiknoolajiyad sare oo khaas ah oo laga keenay Maraykanka oo adeegsata tiknoolajiyada gudbinta xakamaynta heerkulka caqliga leh. Waxay dhaaftay laba shahaadooyin oo caalami ah oo FDA iyo CE. Waxa kale oo loo isticmaalaa adkaynta asturnaanta iyo qurxinta faruuryaha, iyada oo aan la suuxin, qalliin, iyo muddada dayactirka. Mashruuc dib -u -nooleyn raaxo leh oo gaar loo leeyahay.
-Qalliin La'aan ● Heerkulka La Xakamey Fre Joogitaanka Raadiyaha